Kedu ihe bụ Ryuko Memorial Hall | Ryuko Memorial Hall
Na-emegide Halllọ Nzukọ Ncheta RyukoOgige RyukoA na-echekwa ụlọ ochie na onye nnweta ụlọ, ma ndụ nke onye na-ese ihe ka na-ebunye.
Pịa ebe a maka ozi ngosi ọhụụ
Ihe Ryuko kacha amasị ya
Amuru na Wakayama City.
Mụ na ezinụlọ m kwagara Tokyo.Nke mbụ tolitere na Asakusa Nihonbashi.
Mụrụ ihe osise nke Western na Hakuba-kai na Association Pacific Painting.
Gaa njem United States.Mgbe ọ laghachiri Japan, ọ gbanwere ihe osise ndị Japan.
Ahọrọ ya na nke izizi na ihe ngosi nka nka nka nke Japan.
Natara onyinye Chogyu na Ngosiputa nke Institution nke ato.
Ahọrọ maka 4th Institution Exhibition.Nihon Bijutsuin Doujin kwadoro ya.
Builtlọ a rụrụ ọhụrụ na ime ụlọ eserese na Araijuku.
Na-ajụ Nihon Bijutsuin Doujin.
Nkwupụta nke nguzobe nke Seiryusha.A na-eme ihe ngosi izizi.
Natara Usoro nke Omenala.
Emeghere Halllọ Nzukọ Ncheta Ryuko.
Ọ nwụrụ na Septemba 4 ka ọ gbara afọ iri itoolu na atọ.